ဆွစ်နိုင်ငံBasel မြို့က မျက်နှာဖုံး စွပ် ချီတက်ပွဲ ပွဲတော် – XIII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဆွစ်နိုင်ငံBasel မြို့က မျက်နှာဖုံး စွပ် ချီတက်ပွဲ ပွဲတော် – XIII
ဆွစ်နိုင်ငံBasel မြို့က မျက်နှာဖုံး စွပ် ချီတက်ပွဲ ပွဲတော် – XIII
Posted by Kyaemon on Sep 21, 2012 in Cultures, Education, Entertainment, Photography, Style & Beauty, Travel |4comments
Basel Carnival Swiss
Fasnacht in Basel (BS) – Switzerland Tourism
Basel မြို့က ပွဲတော်ဟာ ဆွစ်နိုင်ငံ မှာအစည်ကားဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးပွဲတော်ဖြစ်တာ၊
လူပေါင်း ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ထိပါဝင်ဆင်နွဲကြတာ၊
Ash Wednesday နောက်တပတ် တနင်းလာ နေ့နံနက် ၄ နာရီကစပြီး ပုလွေတွေမှုတ် အိုးစည်တွေတီးရင်းချီတက်ကြတော့တာ၊
Fasnacht in Basel (BS)
Monday to Thursday following Ash Wednesday
The Fasnacht (carnival) in Basel is recognized as the largest popular festival in Switzerland, with some 15,000 to 20,000 masked participants taking part.
(ပုံအသေးမှာ အမေရိကန်သမတဟောင်း George W Bush (Bush အငယ်) ကိုသရော်ထားတာ)
Basel ပွဲတော်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ နဲ့ မတ်လအကြား Basel မြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတာ ဥရောပတိုက်ကအကြီဆုံးပွဲတော် ၅၀ ထဲ စာရင်းဝင်တာ၊
ကြာသပတေး နံနက် ၄ နာရီအထိ သုံးရက်တိုင်တိုင် (၇၂ နာရီ တိတိ) ဆင်နွဲကြပြီး၊ အလှပဆုံး ၃ ရက်လို့လဲ ခေါ်ဆိုရည်ညွှန်းကြတာ၊
Carnival of Basel – Wikipedia, the free encyclopedia
The Carnival of Basel (German: Basler Fasnacht) is the biggest carnival in Switzerland and takes place annually between February and March in Basel. It has been listed as one of the top fifty local festivities in Europe.[
basel1The Basler Fasnacht starts on the Monday after Ash Wednesday at precisely 4:00 am with the so-called Morgestraich (see below). The carnival lasts for exactly 72 hours and, therefore, ends on Thursday morning at 4:00 am. During this time the Fasnächtler (the participants) dominate the old town of central Basel, running free in the streets and restaurants. Basler Fasnacht is often referred to as die drey scheenschte Dääg (“the three most beautiful days”).
၂၀၁၂ က Basel ပွဲတော်ပါ
BASEL CARNIVAL 2012 A
၂၀၁၁ က Basel ပွဲတော်ပါ
“ မျက်နှာဖုံးစွပ်များ ပလွေမှုတ်ပွဲ ” လို့ ဆိုရင် ပိုမှန်မယ် မှတ်တယ်
ကြည့်ရရှုရ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် …
မသိရတာလဲ သိရလို့ ကျေးကျေးပါ …
နောင်များလဲ ထူးခြားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို မြင်ခွင့်ရချင်ပါတယ်…။
ကို Shar Thet Man
“ဗဟုသုတရတယ်” ဆိုလို့ အားရ ဝမ်းသာ မိပါတယ်
ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်နားမှာရှိတဲ့ “Kyaemon” ကလောင်နံမယ် ကိုနှိပ်ရင်
“အခြားအလားတူဆောင်းပါးတွေရဲ့ စာရင်းဇယားတွေ” ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်၊
(ခုဆိုရင်စာမျက်နှာ ၁ မှ ၁၀၇ ရှိပြီး၊ ဆောင်းပါး ၅၃၃ ရှိကြောင်း သိရတယ်၊)
အောက်နားက “View all posts by Kyaemon” ကိုနှိပ်ရင်လဲ ဒီလိုဘဲဇယား တွေရနိုင်တယ်